I-Hyper RPG Yenza amandla i-YouTube ne-Twitch Live Streaming Workflows nge-Blackmagic Design - NAB Bonisa Izindaba nge-Broadcast Beat, Umsakazo Osemthethweni we-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
Ikhaya » Izindaba » I-Hyper RPG Yenza amandla i-YouTube ne-Twitch Live Streaming Workflows nge-Blackmagic Design
Fremont, CA - July, 10, 2019 - I-Blackmagic Design namhlanje umemezele ukuthi i-Hyper Rabbit Power Go (i-Hyper RPG), indawo yokubutha kwi-intanethi egxile kuzungeze ividiyo ne-tabletop gaming, amabhuku amahlaya, ama-movie nokunye, ifake i-Pocket Cinema Camera 4K, i-ATEM Television Studio Pro 4K ne-ATEM Television Studio HD ama-switch switches aphilayo futhi ngaphezulu ukudubula nokuphila ngokusakazwa kuzungeze amahora angu-30 wokuhlela ngesonto eziteshini zayo ze-YouTube ne-Twitch.
Idalwe ku-2015 ngumthuthukisi wegeyimu we-Jordan Weisman (BattleTech, Shadowrun) kanye nomqhubi wesiteshi sesiteshi sesiteshi se-Geek neSundry Twitch uZac Eubank, i-Hyper RPG idlulisa imingcele yokuxoxisana ngokuhlanganyela kanye nokwabelana okuhlangenwe nakho kwezemidlalo kuwo wonke iwebhu nasemhlabeni jikelele. I-Hyper RPG iyahamba bukhoma ezinsukwini ezinhlanu ngesonto phakathi nemini, futhi iziteshi zayo ze-YouTube ne-Twitch ziheha okungaphezu kwezibukeli eziyizigidi eziyi-44 phakathi nalezi zimifudlana eziphilayo. Okungaphakathi kokuqukethwe okuvela kumdlalo wokudlala odlalwayo wokudlala, njengamaDunge namaDragons, ku-Twitch kuya ezindabeni ze-superhero naku-movie trailer ukusabela ku-YouTube.
"Kusukela saqala i-Hyper RPG eminyakeni emine eyedlule, sisebenzise I-Blackmagic Design. Sineziklasini ezimbili ezikhishwe nge gear, futhi sincike kakhulu kulo, "kusho u-Eubank. "Sisanda kufaka i-Pocket Cinema Camera 4K, i-ATEM Television Studio Pro 4K, i-ATEM Television Studio HD futhi ngaphezulu ukuphakamisa nokuhlanza imikhiqizo yethu. "
I-studio encane ye-Hyper RPG ifakwe i-Pocket Cinema Camera 4K ne-ATEM Television Studio HD ukudubula okuqukethwe okungcono ngesikhathi esifanele kwe-YouTube, okuyizinto eziningi ezithinta izici ze-pop. Izihloko ezihlanganisiwe zibandakanya ukusabela kwe-trailer ye-movie, izingxoxo zama-movie we-superhero zakamuva kanye nokuqukethwe okungaphezulu "okumangalisayo".
"Asinaso ithimba elikhulu, ngakho-ke sinamagoli afana ne-Pocket Cinema Camera 4K ne-ATEM Television Studio HD uphelele kithi, "wanezela u-Eubank. "Kulula kakhulu ukuyisebenzisa futhi ayidingi ukuchaza okuningi, okuvumela wonke umuntu ukuba angene futhi athathe okuqukethwe njengoba adingeka ngaphandle kokulahlekelwa ishaye."
Ikhamera ye-Pocket Cinema 4K ivumela i-Hyper RPG ukudubula ama-crisp, izithombe ze-4K ze-YouTube. Ikhono layo lokubhaka ku-LUTs njengoba kudingekile kube usizo olukhulu kwethimba njengoba banezinhlobo ezahlukene ze-LUT ezibonisweni ezahlukene. U-Eubank wachaza, "Sisebenza esimweni esiqinile kakhulu ngakho sidinga ukusindisa isikhathi esiningi ngangokunokwenzeka kokuthunyelwe. Sinokubukeka okuqondile okwakhiwe kwikhombisa ngayinye esilondolozile njenge-presets ekhamera. Singakwazi ukuwalayisha ngaphambi kokurekhoda nokulondoloza ithimba lethu lokuthunyelwe isikhathi esithile. "
Isici se-compact yefomu yekhamera ehlangene nokulawula kwayo kwe-XLR nokulalelwayo nakho kubhekwa izinzuzo ezinkulu ngoba banquma inani lempahla eyengeziwe edingekayo.
I-ATEM Television Studio HD ivumela ithimba ukuthi lidale izinhlelo zekhamera eziningi futhi liqede umbukiso njengoba kwenzeka, futhi iqede umsebenzi osindayo wokukhiqiza ngemuva. I-compact design iboniswe ukuthi iyasiza kakhulu, njengoba ingahamba nayo emsebenzini wensimu.
I-studio yesibili ihlanganisa i-ATEM Television Studio Pro 4K, irekhodi le-HyperDeck Studio Mini, i-UltraStudio HD I-Mini capture kanye nedivayisi yokudlala kanye nama-Blackmagic Studio amaKhamera ayisikhombisa ukudubula konke okuqukethwe kwe-Twitch, okuqukethe ukudlala okuphezulu kokudlala kwethebula kanye nezingxoxo ezinamandla ezizungeze imidlalo ehlukene nochungechunge. Lokhu kusakazwa kaningi kuba nabadlali abaningi abajoyina iziqephu zomthelela owengeziwe kanye nekhono labo lokuxoxa indaba.
"I-Blackmagic Studio AmaKhamera ayisikhombisa asethwe esikhwameni sethu sesibili konke axhumeke ku-ATEM Television Studio Pro 4K. Sihlukanisa eziningi zalezi zibonakaliso bese sizifaka kukhompyutha. Enye uhlelo lwethu lokudla okuphelele, kufaka phakathi ihluzo, ngenkathi abanye begijima ngqo ekhadini lethu lokubamba ikhompyutha, ngakho-ke sinokuphakelayo okuhlanzekile ngaphandle kwanoma iyiphi ihluzo. Senza lokhu njengengxenye ngoba konke isithombe sethu emawindini wesithombe senziwa esofthiwe esikhundleni se-hardware ngenxa yezidingo eziyingqayizivele zeTwitch, "kusho u-Eubank.
Uqhubekele, "Ukuze senze ukuvumelanisa, sigijima yonke umsindo wethu nge-ATEM Television Studio Pro 4K bese siyikhiphela kukhompyutha. Senza ukuxuba okugcwele phansi kwezimpendulo zethu zomsindo wekhompyutheni kanye neziphumo nge-ATEM Television Studio Pro 4K kanye. "
Yize i-ATEM Television Studio Pro 4K inamandla amakhulu, ubungako bayo be-compact beyinto enhle ye-Hyper RPG kusukela isikhala ku-premium enjalo ku-studio.
U-Eubank wanezela, "Uma sidlala ama-Dungeons & Dragons, sizoba nabantu abayisithupha abajoyine nathi. Sonke sihlezi etafuleni elikhulu kakhulu, esishiya ekamelweni elincanyana kakhulu ngegesi lethu. Uhlelo lwe-ATEM Television Studio Pro lwe-4K luyinzuzo enkulu kithi. "
Ngaphezu kwalokho, i-Hyper RPG ine HyperDeck Studio Mini ne-UltraStudio HD I-Mini yakhiwe ekuhambeni kwayo kokusebenza ngezikhathi zonke. Baqopha imifula eminingana ngenxa yokuthi okukhiphayo ku-Twitch yi-5,000 kilobytes ngomzuzwana.
"Ngezinye izikhathi amaseva we-Twitch azokwehliswa, ngakho-ke senza ukulandelwa kwemiboniso esiyazi ukuthi kunezimfanelo ezibukwayo ezingcono kubo, bese sizokulayisha ku-YouTube njengokuhlela okuhlanzekile kunokuthunyelwa kusuka ku-Twitch, ngakho-ke ikhwalithi enhle kakhulu, "kusho u-Eubank.
With I-Blackmagic Design ngokunika amandla ngokugcwele ukuhamba komsebenzi wokusakaza okuphilayo, i-Hyper RPG iye yakwazi ukuba yinkampani yokukhiqiza kanye nabathuthukisi bokuqukethwe. Ukuguquguquka kwamagesi nokulula kokusetshenziswa kuye kwasiza ithimba lihlale lishintsha futhi lisebenza. Ngenxa yalokhu, i-Hyper RPG iyakwazi ukuzivumelanisa ngokushesha okuqukethwe ukuhlangabezana nezithakazelo zezilaleli zayo.
Izithombe zomkhiqizo we-Pocket Cinema Camera 4K, ATEM Television Studio Pro 4K, ATEM Television Studio HD, HyperDeck Studio Mini, i-UltraStudio HD Amakhamera ama-Mini, ama-Blackmagic Studio nakho konke okunye I-Blackmagic Design imikhiqizo iyatholakala ku www.blackmagicdesign.com/media/images.
Dalet Ukuthola Ooyala Flex Media Platform Ibhizinisi - Julayi 15, i-2019
Memezela i-Aurora Health Campaign / I-Colonie I-Blackmagic Design I-Blackmagic Design ATEM Television Studio Pro i-4K I-Blackmagic Design Pocket Cinema Ikhamera 4K Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe Ukuhlela I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor I-Hyper RPG i-isovideo, i-viarte, i-HDR, ukunciphisa komsindo, i-HDR / i-WCG, i-HEVC / AVC, i-HEVC, i-JCT-VC, i-2015, i-bitrate ukunciphisa, immersive, i-UHD / i-4K / i-HD, i-H264 / i-H265, i-Warsaw ukukhiqizwa kokuthunyelwe SJGolden - I-SoftAtHome, i-MStar, i-CES2017 Ama-spears nama-Arrows I-Colonie I-Colonie - Izindaba I-COLONIE / Chicago Ubuchwepheshe be-TV I-TVU Izinethiwekhi Umlingisi wevidiyo	2019-07-10
Olandelayo: I-Soularity Sound Relies ku-NUGEN Audio ngemikhiqizo yayo yeRock-Solid kanye ne-Service Customer